အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ အဗ်နာ နှင့် ပရိတ်သတ်များ
ရေနွေး ဖြင့် ဝါဖြေခြင်း ၏ အကျိုး ကျေးဇူး
ဧပွီ ၂၉, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၄ ညနေ
ရေနွေး ဖြင့် ဝါဖြေခြင်း ၏ အကျိုး ကျေးဇူး နှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အမီးရွလ်မိုအ်မေနီ မောင်လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရှီအာ ဆိုသည်မှာ ... ?
ဧပွီ ၂၈, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၉ ညနေ
အမီးရွလ်မိုအ်မေနီ မောင်လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရှီအာ ဆိုသည်မှာ ... ? ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ် ဖြင့် အမီးရွလ်မိုအ်မေနီ မောင်လာ အလီ ( အ.စ) ၏ ရှီအာ များ ၏ အရည်အချင်း အရည်အသွေး ပြ ဟဒီးစ်တော် မှန် အပါး (၄၀) အား အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းချက်များ နှင့် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
အဲအ်သေကာဖ် နှင့် အီးဒ်အတွက် လနှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးများ နှင့်အဖြေများ နှင့် ဖေသ်ရဟ် အကြောင်း တစေ့ တစောင်း
ဧပွီ ၂၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၄ ညနေ
အဲအ်သေကာဖ် နှင့် အီးဒ်အတွက် လနှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးများ နှင့်အဖြေများ နှင့် ဖေသ်ရဟ် အကြောင်း တစေ့ တစောင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး H.I ဒေါက်တာ ဟာဂ်ျ မိုဟမ္မဒ်ရေဇာဒါဝဒ်ဒါနီ ဆပ်၏ ရေးသားထားမှုကို တင်ပြအပ်ပါသည်။
လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားသည့် အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် နှင့် အခြားရိုဇဟ် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ
ဧပွီ ၂၀, ၂၀၂၂ - ၁၀:၂၈ ညနေ
လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ရိုဇဟ် မထားသည့် အတွက် ကဖ်္ဖရဟ် နှင့် အခြားရိုဇဟ် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ အကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး H.I ဒေါက်တာ ဟာဂျိ မိုဟမ္မဒ်ရေဇာဒါဝဒ်ဒါနီ ဆပ်၏ ရေးသားထားမှုကို တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဝါဖြေချိန် တွင် ဖတ်ရမည့် ဒိုအာ များ
ဧပွီ ၂၀, ၂၀၂၂ - ၁၀:၂၇ ညနေ
ဝါဖြေချိန် တွင် ဖတ်ရမည့် ဒိုအာ များကို အီမာန်သက်ဝင် ယုံကြည်သူများ အတွက် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ရိုဇဟ် ဆိုသည်မှာ ?
ဧပွီ ၃, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၇ ညနေ
ရိုဇဟ် အကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး H.I ဒေါက်တာ ဟာဂ်ျ မိုဟမ္မဒ်ရေဇာဒါဝဒ်ဒါနီ ဆပ်၏ ရေးသားထားမှုကို တင်ပြအပ်ပါသည်။
အိမ်တွင် ဧည့်သာ လာရောက်ခြင်း ၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ
မတျ ၂၉, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၃ ညနေ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အိမ်တွင် ဧည့်သာ လာရောက်ခြင်း ၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ဘက်သို့ ညွှန် ပြ ၍ ဆုံးမ မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။
ရဂျဗ်လမြတ် ၏ ၂၇ ည တွင် ပြုကျင့်ရမည့် ကျင့်စဉ်များ
ဖဖေျောဝါရီ ၂၈, ၂၀၂၂ - ၆:၃၆ ညနေ
ဤညသည် ရှက်ဗ် မဗ်အက်စ် ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တရာ မင်္ဂလာ ရှိသည့် ညကောင်းညမြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ဤညတွင် ကျင့်ရမည့် ကျင့်စဉ် အချို့ လာရှိပါတယ်။ ၎င်းကျင့်စဉ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ... မိုအ်မင်သူတော်စင်အပေါင်း ဤကျင့်စဉ်များကို ကျင့် နိုင်ရန် စွမ်းအား များကို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ပေးသနားတော်မူပါစေ ။
နိုဝငျဘာ ၁၀, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အစ္စလာမ် မစ် အစိုးရ တည်ထောင် ခြင်းဆိုသည့် ဆောင်းပါး အား အဗ်နာချစ် ပရိတ်သတ်များ အတွက် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အခြေခံ မူ သုံးချက် အေမာမ် အလီ (အ.စ) ၏ အမြင်
နိုဝငျဘာ ၇, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၅ ညနေ
ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ယအ်ကူဗ်ဗရှ်ှဝီး ဆပ် ရေးသား သီးကုံးထား သည့် အဖိုးတန် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်အား ချစ်ခင်လေးစားရသည့် အဗ်နာ ပရိတ်သတ် များအတွက် တင်ပြ လိုက်ပါသည်။ အင်န်ရှာ အလ္လာဟ် အကျိုး အမြတ် ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဇနီးသည် အတွက် ခဲအို နှင့် မတ် တို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟေဂျာဗ်
နိုဝငျဘာ ၂၅, ၂၀၂၀ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇနီးသည် အတွက် ခဲအို နှင့် မတ် တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟေဂျာဗ် ကိစ္စ အား ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ ၏ ဖြေဆိုချက်အား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကေယာမသ် နေ့ တွင် မိမိတို့၏ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ ကို မည်သူကို ပေးရမည်နည်း ?
စကျတငျဘာ ၉, ၂၀၂၀ - ၃:၅၇ ညနေ
ကေယာမသ် နေ့ တွင် မိမိတို့၏ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ ကို မည်သူကို ပေးရမည်နည်း ? ဆိုသည့် အမေးအတွက် အဖြေအား အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှု့  မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
နမာဇ်၏ အရေးကြီး မှု နှင့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ အချို့ / ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ခါမေနာ အီ
ဇှနျ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ခါမေနာ အီ ဖြေကြားထားပေးသည့် နမာဇ်၏ အရေးကြီး မှု နှင့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ အချို့ ဆိုင်မေးခွန်း နှင့် အဖြေများ ဖြစ်ပါတယ်။ khamenei.ir ကို အဓိက ကိုးကားပါသည်။
မတျ ၃၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၀၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် အဘာစ် علیه السّلام ကစီဒါ အား ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ မှ အကျော်အမော် အကျော်အမော် ရှဒမန်ရေဇာ မှ ဖတ်ရွတ်ထား သည့် ဗီဒီယို ကလစ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
မတျ ၂၉, ၂၀၂၀ - ၁၀:၄၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ကာတွန်းဆရာမှ ကိုရိုနာယ ဗိုင်းရက်စ် အလွယ်တကူ မကူးဆက်ရန် Mask တပ်ရန် နှင့် လက်ဆေးရန် အရေးကြီးပြ ကာတွန်းကို သေချာ စွာ ရေးဆွဲပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၉ - ၁၁:၄၈ ညနေ
မေ ၉, ၂၀၁၉ - ၈:၂၃ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကြောင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် အဇါးဗ်ကို မကျတော်မူ ခြင်း
ဧပွီ ၂၄, ၂၀၁၉ - ၉:၃၃ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) ကြောင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် အဇါးဗ်ကို မကျတော်မူ ခြင်း အကြောင်း လေါလာ ကြပါစို့ ...
အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဗင်ဆ ဗါ ၏ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဧပွီ ၂၃, ၂၀၁၉ - ၁၀:၃၁ ညနေ
အဗ်ဒိုလ္လာဟ် ဗင်ဆ ဗါ ၏ အကြောင်း တစေ့တစောင်း အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များအတွက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အေမာမ်ဟစန် (အ.စ) သခင် အနေဖြင့် ဟဇရသ် အဘူဗကဲရ် အား မင်ဗဲရ် ပေါ် မှ ဆွဲချခြင်း
ဖဖေျောဝါရီ ၂၃, ၂၀၁၉ - ၂:၂၄ ညနေ
ဤနေရာတွင် ကျမ်းအကိုးအကား ဓာတ်ပုံများ ဖြင့် အမှန်တရားကို သိရှိရန် အတွက် ပြောပြသွားမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြဿနာတက်စေလိုသည့် ရည်ရွယ် ချက်၊ စော်ကားလို သည့် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဟု မသတ်မှတ်ကြရန်လေးစားစွာ မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါတယ် ။